Articles - Babi Mild Moms Club
Dr.Mild အမေးနှင့်အဖြေ 162
MomsClub Ambassador 1
Uptodate Child Articles 22
ဒေါက်တာ အိအိခင် 99
ဒေါက်တာ မောင်သင်း 17
ဒေါက်တာ မြင့်လွင် 17
ဒေါက်တာ မြတ်စန္ဒာကျော် 1
ဒေါက်တာ Mild နှင့် အမေးအဖြေ (အပိုင်း – ၁၆၂)
ဘေဘီလေးတို့အရေး ဆွေးနွေးရအောင် (၂၉)
ဒေါက်တာ Mild နှင့် အမေးအဖြေ (အပိုင်း – ၁၆၁)
ဒေါက်တာ Mild နှင့် အမေးအဖြေ (အပိုင်း – ၁၆၀)
ဘေဘီလေးတို့အရေး ဆွေးနွေးရအောင် (၂၈)
ဒေါက်တာ Mild နှင့် အမေးအဖြေ (အပိုင်း – ၁၅၉)
ဒေါက်တာ Mild နှင့် အမေးအဖြေ (အပိုင်း – ၁၅၈)
နှာရည်ကျခြင်း၊ နှာစေးခြင်းနှင့် နှာခေါင်းပိတ်လျှင် ဘယ်လိုပြုစုရမည်နည်း။
Healthi Plus (0)
Nipple Liquid Cleanser (0)
articles, Dr.Mild အမေးနှင့်အဖြေ
1. အိမ်ထောင်ရှိသည် ကလေးကမွေးပြီး၁၅ရက်ရှိပါပြီ။ ချက်မကြွေသေးဘူးဆရာရှင့်။ စိုးရိမ်ရပါသလားရှင့်။ ဒီထက်ထူးခြားမှု မရှိရင် စိတ်မပူရပါဘူး… ချက်ကြိုးအကြောင်းကိုအောက်က Link မှာရှိတဲ့ ဆောင်းပါးလေးမှာဖတ်ကြည့်ပေးပါ… http://babimildmomsclub.com.mm/?p=5971 ကျန်းမာပျော်ရွှင်ပါစေ Dr.Mild ——————————-...
မေး။ ။ ကလေးနို့မဝတဲ့အခါ နို့ဘူးတိုက်လို့ ရပါသလား။ ဖြေ။ ။ မိခင်နို့ကိုခဏခဏပေးစို့လျှင် နို့ထွက်များလာပြီးကလေးနို့ဝလာမှာပါ။ ကလေးကို နို့မတိုက်ခင် မိခင်ကအရည်များများသောက်ပါ။ နို့၊ ကော်ဖီတို့ သောက်လို့ရပါတယ်။ မိခင်နို့သာကလေးအတွက် အကောင်းဆုံးမို့ မိခင်နို့သာတိုက်ပါ။ ကလေးနို့စို့ပြီးရင်...
1. Angel Queen ဆရာရှင့်​သားကြီးက၉လ​ကျော်​ပါပြီ​။ နေ့လည်​ခင်း​တွေအစာ​ပြေဘာမုန့်​​တွေ​ကျွေးလို့ရ​သေးလဲ။ ရှင့်​ကြက်​သားဘီစကစ်​နဲ့အနှစ်မပါတဲ့​ပါမု့န့်​​တွေ​ကျွေးလို့မရ​တော့လို့ပါရှင့်​။ ဒီအရွယ်မှာ ဘာကျွေးရမယ်၊ ဘာမကျွေးရဘူးလို့ အထူးတလည် သတ်မှတ်ထားခြင်း မရှိပါဘူး… အာဟာရ မျှတအောင် ကျွေးပေးဖို့တော့ လိုအပ်ပါတယ်… နောက်ပြီး ကလေးကို...
အဖျားကြီးပြီးတက်သောကလေးကိုဘယ်လိုပြုစုရမလဲဆိုရင် ဒီကလေးတက်ရသည်မှာအဖျားကြီးလို့ဖြစ်တာကြောင့် အဖျားကျအောင် လုပ်ရပါမယ်။ တက်နေသောကလေးကိုဘေးစောင်းထားပါ။ အန်ဖတ်မစို့အောင်လို့ပါ။ ပူခြစ်နေသောခေါင်းကိုအေးနေသောရေဝတ်နှင့် ခေါင်းမှစပြီးသုတ်ပါ။ အထူးသဖြင့် ခေါင်းကိုအေးအောင် လုပ်ရပါမယ်။ တက်နေပြီဆိုရင် ခေါင်းကိုအေးအောင် လုပ်ရုံတင်မကဘူး၊ နီးရာဆရာဝန်ဆီသွားရပါမယ်။ အတက်ကျအောင် စအိုမှဆေးသွင်းပြီးလုပ်ရပါမယ်။ အဖျားကြီးပြီးတက်တတ်တဲ့ကလေးကိုဖျားရင်...
1. မဝေဝေလွင် ဆရာရှင့်သားလေးက၆လပါ။ အိပ်တဲ့အခါနာရီနည်းနည်းပဲအိပ်ပါတယ်။မိနစ်၂၀လောက်အိပ်ပြီး၃နာရီလောက်မှပြန်အိပ်ပါတယ်။အိပ်တဲ့အားဆေးကျွေးစရာလိုမလား။ဘာဆေးတိုက်ရမလဲသိချင်လို့ပါ။ပြန်ဖြေပေးပါနော်။ အိပ်တဲ့ အားဆေးရယ်လို့ မရှိပါဘူး… ဗီတာမင် စုံလင်တဲ့ အားဆေးတစ်မျိုးမျိုး တိုက်ကျွေးလို့ရပါတယ်… ၃လမှ၆လအထိကလေးအိပ်စက်ခြင်းဆိုင်ရာ ဆောင်းပါးလေးကို အောက်က ပေးထားတဲ့ Link မှာဖတ်ရှုပေးပါ… https://www.facebook.com/BabiMildMyanmar/photos/a.954392134587165.1073741827.948971191795926/1557381844288188/?type=3...
မေး။ ။ (၆)လထက်ငယ်ပါက ထမင်းကျွေး၍ မရဘူးလား။ ဖြေ။ ။ တချို့မိခင်တွေက ရက်သားကစပြီး ကလေးဝမ်းအေးအောင် ထမင်းဝါးခွံကြပါတယ်။ ဒီအပြုအမူ မှားပါတယ်။ ထမင်းကို အစာခြေနိုင်တဲ့ အမိုင်လေ့(စ်)အင်ဇိုင်း (amylase enzyme) ကလေးမှာမရှိသေးခင်...